Dr SaSa speech to people of Myanmar – July 14 – PVTV Myanmar
Lapyae nyein says:
2021-07-14 at 8:36 PM
2021-07-14 at 8:37 PM
မဂ်လာပါ ဆရာအားလုံးအောင်မြင်ပါစေ စစ်အာဏာရူးအမြန်ဆုံးကျဆုံးရှုံးပါစေ
2021-07-14 at 8:49 PM
***WARNING :: RUSSIA & CHINA EMBASSY GET OUT GO HOME MUST LAST***
Ni Ni Aung Bamar says:
2021-07-14 at 8:51 PM
May Thida Aye says:
မင်္ဂလာပါရှင် Dr Sa Sa.
Thanks so much ပါရှင် Dr Sa Sa.
မဂ်လာပါ. Dr. sarsar နိုင်ငံတာဝန်များကို ကျရနေရာထမ်းဆောင်နေလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်
susu san says:
2021-07-14 at 9:15 PM
Dr Sa Sa. ကျန်းမာပါစေ။
2021-07-14 at 9:18 PM
မဂၤလာပါ Dr SaSaတစ္​ဖြဲ႕သားလံုးက်န္​းမာသက္​ရွည္​ၾကပါေစ
2021-07-14 at 9:28 PM
ဒေါက်တာ ဆာဆာ ကျေးဇူးပါ ကျမ္မာပါစေ။
ပြည်သူ့ အစိုးရကို – လက်နက်အားကိုး — မအလ— အကြမ်းဖက်မျိုးတွေက ဆွဲ ဖို့ စောင့်နေတာသေချာ၏။
ပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုး သတ်နေတဲ့ – စကစ -ကို တရား 👉မျှတ‌ 👈 သော ကမ္ဘာကြီးမှ သိရှိနိုင်ပါစေ။
Ko Aunအမေစုကျန်းမာပါစေ says:
2021-07-14 at 9:42 PM
2021-07-14 at 9:55 PM
Sai Moon says:
2021-07-14 at 10:59 PM
King My Road says:
2021-07-14 at 11:24 PM
ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ အပေါင်:တို့ ..
မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမအပေါင်: တို့ရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်သော စစ်ကောင်စီကို စုပေါင်းတော်လှန်ကြပါစို့ | အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်။
2021-07-14 at 11:26 PM
NUG. ..ကာကွယ် ရေးဌာန .. လုပ် သင့်တာ လုပ်ပါ
I am request and support KIA ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်း​မော်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Army's ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီ: ​နေရာပေ:လိုက်ပါ။
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ..စလိုက်တဲ့…ရပ်ရွာ.. မြို့နယ် CDF/PDF တွေကို..
G3..G4…AK47…AR-15 .. M16.. တွေ ထောက်ပံ့ ပါ
အထူးသဖြင့်.. လက်ရှိ well fighting လုပ်နေတဲ့.. Chin Land army. .. ကနီ.. ကတုတ်.. ကလေး.. မင်းတပ် မှာ တိုက်နေတဲ့.. CDF. PDF.. တွေကို.. ခေတ်မှီ သေနတ် တွေ ပေးပါ…
KIA, KIO, KNLA, AA .. တပ်တချို့ .. သွားပေါင်း ပြီး ,, လက်နက်… နည်းပညာ.. အကူအညီ.. ပေးပါ.
Chin State. ..Kachin State. ..Ka yin State. .. လွတ်မြောက် နယ်မြေ ဖြစ် အောင် အရင်လုပ်ပါ…ကြေညာ ပါ…တခြား တိုင်းပြည် နယ်တွေရဲ့ စံပြ အဖြစ် လုပ်ပြပါ
HP. Angelbina says:
2021-07-14 at 11:33 PM
Saw Jiptue sj says:
2021-07-15 at 12:44 AM
စကစကို နိုင်တဲ့ဘက်က တိုက်ထုတ်ကြပါ
2021-07-15 at 4:49 AM
💖With respect and heartfelt thankfulness as always, dr Sa Sa 🙏
2021-07-15 at 10:08 AM
Aye Aye Htike says:
2021-07-15 at 11:52 AM
Mawi Dim says:
Thanks Dr Sasa
Anthony Z B says:
2021-07-15 at 7:46 PM
Dr နှင့်အတူ အမှန်တရားအတွက် ခေါင်းဆောင်များအားလုံး ဘုရားကျေးဇူးတော်ရရှိလို့ အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ၊ရည်မှန်းချက်အားလုံးအောင်မြင်စွာ ပန်းတိုင်အရောက် နိုင့ပါစေ၊
2021-07-15 at 9:13 PM
Thank you indeed, dr Sa Sa 💖
Salute to you as always 🙏
Ma Win Win says:
2021-07-17 at 9:49 AM